Obboo Cala Mohammed Ahmed osoo barattoota Yuniversitii Haramaayaa du’arraa baraaruu lubbuun isaa baate. – Welcome to bilisummaa
Obboo Cala Mohammed Ahmed osoo barattoota Yuniversitii Haramaayaa du’arraa baraaruu lubbuun isaa baate.
‪#‎OromoProtests‬ this was Chala Mohammed Ahmed who was killed on December 12, 2015 in Tuji Gabisa village near Haromaya University because he gave refuge to university students running away from Agazi bullets.
Kun Caalaa Mahammad Ahmad kan Muddee 12, 2015 12/12/2015 naannawa Haromaya University Araddaa Tuujii Gabbisaa keeysatti osoo barattoota yunivarsitii du’arraa baraaruu wareegameedha. “Obboleysi keenyaas suuraan isaa gootoowwan keenya kan wareegaman keysatti akka naaf mul’atu nuuf galmeessaa” obboleeyyan hiriyoota isaa
Previous ‪#‎OromoProtests‬ continue in Guji Zone Jiddola town
Next Dhaloota seenaa boonsaa galmeessaa jiru